Tu Tu Tha: သတင်းသမားလိုလို ဝတ္ထုတိုရေးသူလိုလို
မရေးတာကြာပြီဖြစ်သော စာနယ်ဇင်းသမားဘဝ ကမောက်ကမ ဘက်ကိုခြေဦးပြန်လှည့်ကြည့်တော့ .. တချို့ အချို့သော အချက်တွေက မရည်ရွယ်ဘဲ ထိခိုက်စရာလေးတွေ ပါနေပါတယ်။ စိတ်တော့ မကောင်းပါ။ သို့သော် မရေးလို့လည်းမဖြစ်။ ကျမရဲ့ နုနယ်လှတဲ့ အတွေ့အကြုံသက်သက် ဆိုပေမယ့် ကျမ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ တကယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြန်မာပြည် စာနယ်ဇင်းလောကရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကျမနဲ့အတူ ပါဝင် ဖြတ်သန်း ခဲ့ကြသူတွေရဲ့ အကြောင်းဆိုတော့ တချိန်မှာ ဒါက တစုံတရာမှတ်တမ်း အဖြစ် ကျန်ကောင်း ကျန်နေလိမ့်မယ်။ ကျန်ချင်မှလည်းကျန်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... မြန်မာပြည်စာနယ်ဇင်းလောကမှာ သေးသေး လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထောင့်တထောင့်က ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ကျမ ကျေနပ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ... တလောက စာပေနယ်က သူငယ်ချင်းတယောက်က ကျမကို ပြောလာတယ် ...။ “နင် စာတွေ ရေးတာတော့ ရေးပေါ့ဟာ ... တိုင်းပြည်ကိုတော့ မရောင်းစားနဲ့” တဲ့။ ကျမ တော်တော်လေး အတွေး ပွားသွားရတယ်။ ကျမ လုပ်နေတာက တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားသလို ဖြစ်နေပြီလား ...။ တခါမှ ကျမ အဲဒီလို မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ။ ကျမက ... ကျမ တွေ့ကြုံခဲ့တာကို ရိုးရိုး ပြန်လည်တင်ပြခြင်းသာ။ သူက ဒီ ... ကမောက်ကမ စာစုကို ရည်ရွယ်ပြောနေတာဆိုတော့ ကျမ ပိုလို့ စဉ်းစားရပါတယ်။
နောက်တခုက ကျမက တိုင်းပြည် ပြင်ပ ရောက်နေတာဆိုပြီး ခံခဲ့ရသမျှ ပြန်နှက်လိုက်မဟဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေး မရှိပါ။ ကျမ ဖြတ်သန်းခဲ့စဉ်က ခေတ်၊ စနစ်နှင့် ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်တွေကိုသာ ရေးပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တခုတော့ ရှိတာပေါ့။ ကျမနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သူတွေထဲမှာ ... မရိုးသားသူတွေ ပါကောင်းပါမယ်၊ စာနယ်ဇင်းကို အရေခြုံ လုပ်စားလာသူတွေလည်း ပါကောင်းပါနိုင်တယ်၊ သူတို့အတွက်တော့ စိတ် အနှောင့် အယှက် ဖြစ်စရာဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ကျမ သူငယ်ချင်းကိုတော့ အနိုင်ယူနေကျအတိုင်း “ငါက တိုင်းပြည်ကို မရောင်းစားပါဘူးဟ .. ပေါင်ပဲ သုံးမှာ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းသမားဘဝ ကမောက်ကမ (၁၂)
ကဲ လေရှည်သွားပြီ ... ဆက်ပါမယ်။ အလင်းတန်းဂျာနယ်နဲ့ ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်းက ကျမအတွက် သင်္ခန်းစာ များစွာ ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျမတို့ ဂျာနယ်လစ်တွေအတွက် ဘယ်နေရာပဲ ရောက်ရောက် သင်္ခန်းစာ ယူစရာချည်းပဲ မဟုတ်လား။
Pop ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းဆိုတော့ ကျမတို့ Pop သတင်းတွေကို လိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ အနုပညာနယ်လို့ စာပေ လောကက သုံးနေကျ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ လောကထဲ မွှေနှောက် သတင်းယူရပါတယ်။ ကျမအတွက် ဂီတ ပညာရှင် တွေနဲ့ စကားပြောရတာ ပျော်စရာ ကောင်းသလောက် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ကျတော့ နည်းနည်း စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ အင်တာဗျူးဂျာနယ်မှာ တုန်းကလည်း ကျမ ရုပ်ရှင်လောကသား တချို့ကို ဗျူးခဲ့ဖူးတယ်။ သို့သော် အလင်းတန်းဂျာနယ်က အတွေ့အကြုံကျတော့ တမျိုး။
ဆိုရလျှင် အင်တာဗျူးဂျာနယ်တုန်းက “ဘောင်းဘီဝတ်” တချို့ရဲ့ နာမည်တွေကိုသုံးပြီး ဝိတ်နှင့် ဖြဲရတာလေ။ အဲလိုမှ မလုပ်ရင်လည်း ကိုရွှေ မင်းသား၊ မရွှေ မင်းသမီးတွေက အင်တာဗျူးမပေးချင်ကြဘူး မဟုတ်လား။ ကြောက်လို့ ပေးတယ် ခေါ်မလား။
အလင်းတန်းဂျာနယ်၊ ရွှေအမြုတေ မဂဇင်းကျတော့ တမျိုး။ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဝင်းငြိမ်းက လူချစ် လူခင် ပေါတယ်။ သူ့ကို စာပေနယ်ကကော၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ အနုပညာ နယ်ပယ်ကကော လေးစားသူ များတယ် (လင်းရုံနက်ကြီးနဲ့များတော့ ကွာပါ့။ သူ့ကျ ချစ်တာမဟုတ်ဘူး ... ကြောက်ကြတာ) နောက်တခုက သူ့ ရွှေအမြုတေ မဂဇင်းက လက်ရှိအနေအထားအထိ အဆင့်တခုနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ မဂဇင်းတစောင်။ အနုပညာသတင်းတွေ၊ အင်တာဗျူး၊ ဆောင်းပါးတွေ ဝေဝေဆာဆာပါသလို ဝတ္ထုတိုတွေလည်း ဝအောင် ဖတ်ရတယ်လေ။ ဒီလို မဂဇင်းတစောင်ကို ပဲ့ကိုင်နေသူဆိုတော့ အသိအကျွမ်းပေါများသလို ဦးဝင်းငြိမ်း ဆိုတဲ့ နာမည် ကြားလိုက်တာနဲ့ ဘယ်မင်းသား ဘယ်မင်းသမီးကမဆို အင်တာဗျူးပေးချင်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် တက်သစ်စများနှင့် ဒုတိယတန်း၊ တိယတန်း မင်းသား မင်းသမီးတွေက အလင်းတန်းဂျာနယ်နဲ့ ရွှေအမြုတေ မဂဇင်းမှာ ပါချင်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ပါလိုက်ရင် သူတို့အဖို့ ပေါက်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်နေပုံလည်းရပါတယ်။
ကျမတို့ ဝင်ခါစ သတင်းထောက် ၄ ယောက်ဟာ ကွင်းထဲကို အစိမ်းသက်သက်တော့ မဆင်းရပါဘူး။ စစချင်းမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကွင်းတွေ၊ ဗီစီဒီ ရိုက်ကွင်းတွေကို အဲဒီအချိန်က အယ်ဒီတာ ကိုဦးဆွေနဲ့ ဓာတ်ပုံ ကိုလင်း၊ ဦးဝင်းငြိမ်းတို့နဲ့အတူ သွားရပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ရုပ်ရှင်နယ်ကလူတွေ ဒီမဂဇင်းဂျာနယ်ကို ဘယ်လောက် အားကိုးသလဲဆိုတာ တွေ့ရပါတော့တယ်။
မင်းသမီး မင်းသားတွေကလည်း တော်တော်တော့ သနားစရာကောင်းပါတယ်။ ကင်မရာဘက်လှည့် သရုပ် ဆောင်လိုက်၊ စာနယ်ဇင်းသမားတွေလာရင် သွားဖြဲပြလိုက် လုပ်ရပါတယ်။ စစချင်းဆိုတော့ ကျမတို့က ကိုဦးဆွေ ဘယ်လို အင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဆိုတာ လေ့လာတဲ့ အနေအထားပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ကျမက အင်တာဗျူးဂျာနယ်မှာတုန်းက မင်းသားမင်းသမီးတွေကို အင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုပေမယ့် အနေအထားက နည်းနည်းကွာနေပါတယ်။ သူတို့ ဆက်ဆံပုံကအစ မတူပါဘူး။ ဒီတော့ ကျမအတွက် အသစ်ပဲ ဆိုပါစို့။
အဲဒီအချိန်က မင်းသားရန်အောင်က ရန်အောင်နဲ့သူ၏ ချစ်သူများလား ဘာလားမသိဘူး ဗီစီဒီ ရိုက်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အင်းလျားကန်စောင်းက အိုင်ဘီစီမှာ ရန်အောင်နဲ့ မင်းသမီးတွေ တယောက်ချင်း ရိုက်နေကြတာ။ ရိုက်ကွင်းမှာ မင်းသမီးထဲကဆို ခိုင်သင်းကြည်ရယ်၊ ကြည်လဲ့လဲ့ဦးရယ်တွေ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က ခိုင်သင်း ကြည်က မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကာစပေါ့။ အဲ ... ကိုယ်ဝန်ရှိကာစလည်း ဖြစ်နေတော့ သတင်းသမားတွေကို စကား သိပ်ပြောချင်ပုံမရဘူး။ ကျမတို့လည်း ရိုက်ကွင်းကိုကြည့်ကြ မင်းသမီးတွေ ဘယ်လိုနေလဲ ကြည့်ကြနဲ့ နေ့တဝက် ကုန်တာပါပဲ။ အဲဒီရိုက်ကွင်းကို ကျမတို့ကို ခေါ်သွားရတာ အတွေ့အကြုံရရုံပါ။ ဘာအလုပ်မှ လုပ်စရာ မလိုသေး ဘူး။ တခုတော့ ရှိတာပေါ့ ... နောက်ပိုင်း ပေါ့ပ်သတင်းတွေကို သူတို့ ရေးမယ်ဆိုပြီး ကိုဦးဆွေက မိတ်ဆက်ပေး ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါနဲ့တော့ ဘယ်မှတ်မိပါ့မလဲ။
အဲဒီရိုက်ကွင်းမှာ သတိထားမိတာကတော့ မင်းသားကြီး ရန်အောင်ပါ။ သရုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အလွန်ရဲတင်း တာ တွေ့ရပါတယ်။ မင်းသမီးတွေကို အကိုင်အတွယ် ကြမ်းတယ်ပေါ့လေ။ သူ့ရဲ့ သီအိုရီ ထင်ပါရဲ့.. ရိုက်ကွင်း ပေါ်မှာတင်မကဘူး ... သူက ရိုက်ကွင်း နားတဲ့ အချိန်မှာပါ မင်းသမီးတွေနဲ့ စကားပြောရင် တရင်းတနှီးနဲ့ (မရိုသေ့စကား) ဟိုကိုင် ဒီဖက် စကားပြောလေ့ရှိတာ တွေ့ရတယ်။ မင်းသမီးတွေကလည်း သူ့ကျတော့ တချက် ကလေးမှ ရွံ့တာ မတွေ့ရဘူး။
အစ ဆိုတော့ ကျမတို့ လေးယောက်သား ဟိုငေး၊ ဒီမော့နဲ့ ဘာမှလည်း လုပ်စရာမလိုသေးဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်တော့ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းက ကျမတို့ လေးယောက်ကို ရိုက်ကွင်းအများစု တည်တတ်တဲ့ နေရာတွေကို လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အများဆုံးရိုက်ကွင်းတွေရှိတတ်တာ ဒေါ်ညိုတိုက် လို့ခေါ်တဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းက တိုက်ကြီးတတိုက်ရယ် ...။ နောက်တော့ အဲ့ဒေါ်ညိုတိုက်နားမှာ နောက်ထပ် တိုက်ကြီးတတိုက် ထပ်ဆောက်ပြီး ငှားစားပါတယ်။ သူကတော့ သူဌေးခန်းတွေ ရိုက်ရင်သုံးတာပေါ့။ နောက်တခုက ကီလီ ၆ လို့ ခေါ်တဲ့ ကီလီက ခြံနဲ့ အိမ်ကြီးပါ။
မြန်မာကားတွေ ကြည့်တဲ့သူတွေဆို သိမှာပါ။ အိမ်ကြီးက အုတ်ခံ ပျဉ်ထောင် ရှေးအိမ်ကြီး။ အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုပဲ ဟိုဘက်က လှည့်ရိုက်လိုက် ဒီဘက်ကလှည့်ရိုက်လိုက် ခြံထဲ ဆင်းရိုက်လိုက် လုပ်ကြပါတယ်။ ရှေးကားတွေ ရိုက်ရင် သူဌေးအိမ်ပေါ့၊ တောကားဆို တောသူကြီးတို့၊ တောသူဌေးတို့ပိုင်တဲ့အိမ်က အဲဒီအိမ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဆောင်အနေနဲ့ဆိုရင် အဲဒီက အခန်းတွေကိုသုံးပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးရိုက်တဲ့ ဟာသကား နာမည်တော့ မေ့သွားပြီ သတိရရင်ပြောကြပါဦး၊ လွင်မိုးနဲ့ ရာဇာနေဝင်းပါတာလေ။ အဲ့ကားမှာ လွင်မိုးနဲ့ ရာဇာနေဝင်းနေတဲ့ အဆောင်က အဲဒီကီလီ ၆ အိမ်ကြီးပေါ့။
နောက်တော့ အဲဒီခြံအနောက်ဘက်မှာ ဘန်ဂလိုလို ခပ်ဆင်ဆင် ထရံကာ ပျဉ်ထောင်အိမ် သေးသေးလေးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီအိမ်လေးတွေကတော့ တောကားတို့၊ ဆင်းရဲသားခန်းတို့ရိုက်ရင် သုံးတယ်။ အချုပ်ခန်းလုပ်ဖို့ နေရာလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီအိမ်ကြီးမှာပဲ တရားရုံးခန်းတောင် ရိုက်တာတွေ့ရတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်း နဲ့ ပတ်သက်တာ ရိုက်ရင်တော့ အင်းလျားကန်စောင်းမှာပဲ ရိုက်ကြတာများတယ်။
ကျမတို့ ၄ ယောက်က မနက် ဘားလမ်းက ရုံးကို ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခနထိုင်ပြီး ရုံးကဖုန်းနဲ့ ဖုန်းတွေခေါ်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒါရိုက်တာတွေဆီပေါ့။ ဘယ်ဒါရိုက်တာ ဘယ်မှာကားရိုက်နေတယ် ဆိုတာ ကိုဦးဆွေကလည်း တခါတလေ ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီလို သိရပြီဆိုတာနဲ့ ကားရိုက်ရှိတဲ့နေရာကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ် သွားကြရ တာပဲ။ ဟိုရောက်တော့မှ အဆင်ပြေသလို မေးကြမြန်းကြ။ ဗျူးကြ ...။ ပြီးတော့ တိုက်ကို ပြန်လာ ... အချိန်ရရင် တထိုင်တည်း စာမူထိုင်ရေး၊ အချိန်မရရင် နောက်နေ့မှရေး ... ဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်တာပါပဲ။
အဲဒီရိုက်ကွင်းတွေမှာ ကြုံရတဲ့ အင်တာဗျူး အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း ဖောက်သည်ချချင်ပါသေးတယ်။ တရားရစရာလေးတွေ၊ ရယ်စရာလေးတွေ၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ၊ တခါတလေးလည်း ပျော်စရာတွေပေါ့။
ကျမကတော့ စာရေးဆရာမ ဖြစ်ချင်သူဆိုတော့ ဝတ္ထုတိုတွေကို ကြိုးစားရေးနေပါတယ်။ တဘက်ကလည်း အင်တာဗျူးတွေ ရုပ်ရှင်သတင်း ဂီတသတင်းတွေ ရေးရင်း တဘက်ကလည်း ဝတ္ထုတိုတွေရေးရင်း နေချင်တာပါ။
အဲဒီတုန်းက အယ်ဒီတာ ကိုဦးဆွေက ပျော်ပျော်နေတတ်ပေမယ့် ကျမတို့ကို သိသင့်သိထိုက်တာတွေ တော်တော် သင်ပေးပါတယ်။ ဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ မနေတဲ့အတွက် ကျမတို့ အနေမခက်ဘူးပေါ့။ ကိုလင်းကလည်း ပျော်တတ် ပါတယ်။ ကျမနဲ့တူတူ အလုပ်ဝင်ကြတဲ့ ခင်ခင်ကျော် ဆိုလည်း ကျမ ညီမလေးတယောက်လိုပဲ။ နောက် ကိုကြည်အောင်နဲ့ ကိုသန့်ဇင် ဆိုလည်း ကျမထက် အသက်ငယ်ကြတယ်။ ကျမတို့ ၄ ယောက်က စုစု စည်းစည်းနဲ့ ပျော်ပျော်ပဲ။ သတင်းဆိုလည်း မလုဘူး။ အဆင်ပြေသလိုရေးလိုက်ကြ တာပဲ။ ကိုသန့်ဇင်က သိပ်မကြဘူး အလုပ် ထွက်သွားတယ်။ ကိုကြည်အောင်ရယ် ကျမရယ် ခင်ခင်ကျော်ရယ်ကတော့ နည်းနည်းကြာတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုကြည်အောင်ကြီး ဒုက္ခရောက်တဲ့ ရယ်ရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ နောက်ပိုင်း ရေးပါဦးမယ်။
ကျမနဲ့ ခင်ခင်ကျော်က ခုထိ အဆက်အသွယ်ရှိကြတယ်။ တလောက ဖုန်းဆက်တော့ သူ့ကို ကျမက ''ဟဲ့ ကုလားမ ... ကျုပ်အခု စာနယ်ဇင်းသမား ကမောက်ကမ ဆိုပြီး ရေးနေတာ အလင်းတန်းရောက်နေပြီ။ တချို့ ကျုပ် မေ့နေတာလေးတွေ ပြောပါစမ်းပါ'' လို့ ပြောလိုက်တော့ ... သူက မှတ်မှတ်ရရ ရှိခဲ့တာလေးတွေ ပြန် ပြောပြပါသေးတယ်။
လူသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် တနေရာထဲမှာ အငြိမ်မနေနိုင်ကြဘဲ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရွှေ့ပြောင်းကြတဲ့ သဘောရှိလေတော့ အဲဒီလို ခွဲခွာရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးကွာပေမယ့် သံယောဇဉ်လက်ကျန်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ တနည်းနည်းနဲ့ ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါမှာ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမကတော့ လမ်းခွဲရမယ်ဆိုရင်တောင် အမုန်းတွေနဲ့လမ်းမခွဲချင်ဘူး။ မတတ်သာလို့ အမုန်းတွေနဲ့ လမ်းခွဲရတာတွေလည်း ရှိသပေါ့လေ။ အဲဒီလိုကျတော့လည်း စိတ်မကောင်းပေမယ့် ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
ကျမ ပထမဆုံး ရွှေအမြုတေကို ပေးဖြစ်တဲ့ ဝတ္ထုတိုက 'စက်နှင့်လူ' ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးပါ။ ပေးထားပြီး ရင်တထိတ် ထိတ်နဲ့ သုံးပါ့မလားလို့ ရင်ခုန်ရတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးပေါ့။ ရွှေရဲ့ စံကိုလည်း သိထားတော့ ပိုပြီး ရင်ခုန်ရတယ်။ ဦးဝင်းငြိမ်းကို မမေးရဲလို့ ကိုဦးဆွေကို ခနခနမေးတော့ ကိုဦးဆွေက 'ညည်းဝတ္ထု သုံးဖြစ်တယ်' လို့ပဲ ပြောပါ တယ်။ အဲဒီလိုပြောတဲ့အထိ စိတ်ဒုန်းဒုန်း မချနိုင်သေးပါဘူး။ ဝတ္ထုတိုလေး တကယ်ပါလာတော့မှပဲ ကျမ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။
ဘလော့ပေါ်မှာ ရေးချင်တာကို ရေးချင်တိုင်းရေးနေရတော့ အဲဒီလို အယ်ဒီတာစားပွဲဖြတ်သန်းရတဲ့ အတွေ့ အကြုံကို လွမ်းမိတယ်။ ခင်လိုမင်လို့ စာမူကို သုံးပေးတာ မဟုတ်ဘဲ တကယ်ကိုထိုက်တန်လို့ သုံးပေးတယ် ဆိုတာ ခံစားရတဲ့အတွက် ဒီတပုဒ်နဲ့တင် ငါစာရေးဆရာဖြစ်ပြီပဲ ဆိုပြီး မာန်တက်တယ် :P
အဲလိုပြောလို့ ဘလော့ပေါ်မှာ ရေးနေတဲ့သူတွေကို ပုတ်ခတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြောက်ခမန်းလိလိ ကောင်းတဲ့ စာမူတွေ ... စာမျက်နှာပေါ်ရောက်သင့်တဲ့ စာမူတွေအများကြီး ဘလော့ပေါ်မှာ တွေ့နေရသားပဲ။ စာမျက်နှာပေါ် တင်ပေမယ့် အယ်ဒီတာကောင်းရဲ့ စားပွဲကို မဖြတ်သန်းဘဲနဲ့တော့ စာရေးဆရာဟေ့လို့ ကြွေးကြော်လို့ ဘယ်ရပါ့ မလဲ။
ကျောက်ရိုင်းတုံးတွေက အများကြီးပဲ။ မှတ်ကျောက်တင်လိုက်ရင် အဖိုးတန်ကျောက်ဖြစ်လာမယ့် ကျောက်ရိုင်း တွေပေါ့။ မှတ်ကျောက်တင်ခွင့်မရကြ သေးတာပါ။ ကျမကတော့ အနည်းငယ် မှတ်ကျောက်တင်ခွင့် ရခဲ့တယ် ဆိုတာကို ပြန်ဝေမျှ ချင်တာပါ။ တချိန်ကျရင်တော့ အဲဒီကျောက်ရိုင်းတွေ သွေးခွင့်မှတ်ကျောက်တင်ခွင့် ပျော်ပျော်ကြီးရကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ...။ ဆက်ပါဦးမယ် ...။
Friday, November 20, 2009 | Labels: ဖြတ်သန်းမှုစာစု |
This entry was posted on Friday, November 20, 2009 and is filed under ဖြတ်သန်းမှုစာစု . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
မတူးရေးတဲ့ပို့စ်လေးတွေဖတ်တိုင်း7daysနဲ့ ကုမုဒြာကဘ၀လေးကို အမြဲပြန်လွမ်းတယ်..
မင်းသားကြီးရန်အောင်က ညီမ အသည်းကျော်လေ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် မင်းသား အစ်မကလဲ သူက အကိုင်အတွယ်ကြမ်းပေမယ့် တစ်ချို့တစ်ချို့သော မင်းသားတွေလို တဏှာစိတ်နဲ့ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူးနော် ဟီဟီ ချစ်သူဘက်က ဘက်လိုက်သွားသည်..
စာရေးဆရာဖြစ်ချင်လိုက်တာ ... ဟီးဟီး
သူများကိုများ ကုလားမတဲ့။ ငကျီးခြောက်နော်... အဟက်
ဒါပေမယ့်ကွယ် တိုင်းပြည်ကို ပေါင်တာတော့ မကောင်းဘူး။ တော်ကြာ ပြန်မရွေးနိုင်ရင် လက်ပြောင်း ရောင်းခံရအုံးမယ်နော်။ သေချာ ငွေစုထားနော်။ တိုင်းပြည်ကို ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ပါ။
ဓာတ်ခွဲခန်းပြင်ပက သင်္ချာသစ် သဘောတရားတခု